क्रिकेट : फेरि फर्किएला 'क्रेज'?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
क्रिकेट : फेरि फर्किएला 'क्रेज'?
महिला क्रिकेटको सुरुआत गर्ने नेपालगन्ज नै अहिले संकटमा पर्न थालेको छ । ममता र नेरीसहित २००७ को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालगन्जबाट सात खेलाडी राष्ट्रिय टिममा थिए । त्यस बेला नेरी र महिला क्रिकेटको क्रेज छुट्टै किसिमको थियो ।
भाद्र २८, २०७६ सविना कार्की
- मलेसिया, सन् २००७ जुलाई १२ तारिख । नेपाली महिला क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रियमा ‘डेब्यु’ गरेको दिन । पहिलो प्रतिद्वन्द्वी थियो थाइल्यान्ड । थाइल्यान्ड र नेपालको मात्र होइन एसोसिएट राष्ट्र सबैको त्यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता थियो । नेपालले थाइल्यान्डमाथि सहजै ५५ रनको जित हात पार्‍यो । पहिलो सहभागितामै नेपाल फाइनल पुग्यो । बंगलादेशसँग पराजित भएपछि उपविजेता बनेको नेपाल महिला क्रिकेटमा भविष्य उज्यालो छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो ।
- सन २०१९, सेम्टेम्बर ५ । थाइल्यान्डले पहिलो पटक ट्वान्टी–२० विश्वकपमा स्थान बनायो । छनोट खेलमा पपुवा न्युगिनीमाथि सेमिफाइनलमा आठ विकेटको जित हात पारेपछि थाइल्यान्डले अर्को वर्ष आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान पक्का गर्दै इतिहास रच्यो ।
मंसिरमा घरेलु मैदानमा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) खेल्ने टोलीको पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा छन् पहिलो पुस्ताका चार खेलाडी ममता थापा, रीतु कनोजिया, नेरी थापा र सीता रानामगर । टेलिभिजनमा थाइल्यान्डको खेल हेरिरहनुपर्ने बाध्यता थियो उनीहरूसँग । थाइल्यान्ड विश्वकप पुग्दा नेपाली खेलाडी पहिलोपटक घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने खुसीमै सीमित छन् ।
गौशालाको एक होटलमा यी चार खेलाडीलाई भेट्दा उनीहरूको लगभग एकै मतजस्तो थियो— के हामी हामी थाइल्यान्डभन्दा अघि नै विश्वकप खेल्न सक्षम थिएनौं र ? उनीहरूको प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? महिला टिमकी पहिलो कप्तान नेरीले आफूहरूले सहजै हराउने टिम विश्वकप पुगेको देख्दा खुसी हुने कि दुःखी हुने थाहै नभएको बताइन् । छेउमै रहेकी रीतुको अनुहारमा सफलताबाट सुरु भएको यात्राले गन्तव्य भेट्न नसकेको भाव झल्किरहेको थियो । सीताले सुरुआतदेखि नै छनोट खेल पछ्याइरहेकी थिइन् । उनले थाइल्यान्डलाई समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गरिरहिन् । थाइल्यान्ड टिमका धेरै सदस्य आफूसँगै खेलेका साथी भएकाले पनि सीता थाइल्यान्ड विश्वकप पुगोस् भन्ने चाहन्थिन् । भयो पनि त्यस्तै । विश्वकप पुगेपछि थाइल्यान्डलाई बधाई दिँदा उनको मन भने अमिलो भइरहेको थियो ।
‘थाइल्यान्ड विश्वकपमा पुग्यो खुसी भए अनि सँगै खेल हेरिरहेका अरू साथीतिर फर्केर हेर्दा मन खल्लो भयो,’ सीताले थाइल्यान्ड विश्वकपमा पुगेपछि दिएको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, ‘हामी थाइल्यान्डभन्दा अघि नै विश्वकप खेल्नुपर्ने टिम हौं । तर हामी त ग्लोबल छनोटमा पुग्न नै संघर्षरत छौं ।’ नेपाल अहिलेसम्म ग्लोबल छनोटमा पुग्न सकेको छैन । थाइल्यान्डले एसिया छनोटमा नेपाललाई पराजित गरेको थियो ।
नेपालले २००८ देखि २०१२ सम्म तीनपटक एसीसी यू–१९ को उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्‍यो । पत्रकारितामा आउनुअघि खेलाडी हुँदा मलाई पनि कहिल्यै थाइल्यान्ड बलियो टोली लागेन । २००८ मा एसीसी यू–१९ को उपाधि हामीले थाइल्यान्डमै उचाल्दा थाइल्यान्डलाई नै सेमिफाइनलमा ८३ रनले पराजित गरेका थियौं । २५ ओभरको खेलमा जित–हारको यो ठूलो भिन्नता हो । यति बेलासम्म पनि थाइल्यान्ड मैदानभित्र नेपालका सामु कमजोर नै थियो । उसको घरेलु क्रिकेटको लगानीले नेपाललाई धेरै पछाडि छोडिसकेको थियो । २०११ को एसीसी महिला च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक नेपाल थाइल्यान्डसँग सात विकेटले पराजित भयो । त्यसयता अहिलेसम्म नेपालले थाइल्यान्डलाई पराजित गर्न सकेको छैन ।
सफ्टवल, बेसबललगायत खेलका खेलाडीलाई बटुलेर टिम बनाएको थाइल्यान्डलाई महिला क्रिकेटले विश्वकपमा पुर्‍याएको छ । सहजै थाइल्यान्ड विश्वकपमा पुगेको पनि होइन । उसले महिला क्रिकेटमा विश्वकप खेल्ने सम्भावना देख्यो र त्यहीअुनसारको लगानी र एक्सपोजर दियो । घरेलु मैदानमा लगातार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै खेलाडीको क्षमतालाई फर्कने अवसर प्रदान गर्‍यो । वैदेशिक्षक प्रशिक्षण र भ्रमणहरूको निरन्तरताले थाइल्यान्ड नेपाललाई पछि पार्दै बलियो टिमको रूपमा अघि आयो र विश्वकपसम्मको यात्रा तय गर्‍यो । कुनै समय नेपालको पुरुष क्रिकेटभन्दा अघि विश्वकप खेल्ने सपना देखेको दिनलाई सम्झँदै ममताले भनिन्— अब त हाम्रो पहिलो लक्ष्य नै थाइल्यान्डलाई हराउनु हो ।
महिलाले पुरुषभन्दा छिटो विश्वकप खेल्छन् भनेर आफ्नै खर्चमा महिला टोलीलाई २०१० को एसियाली खेलकुदमा पठाएको क्यानका तत्कालीन अध्यक्ष विनयराज पाण्डे सम्झन्छन् । ‘तर, महिला क्रिकेट यसरी खस्केला भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ,’ पाण्डे भन्छन् । कुनै पनि खेलमा लगानी नतिजामा भर पर्छ । महिला क्रिकेटले उमेर समुहमा तीन उपाधि जितेर प्रमाणित गर्दा पनि उनीहरू ओझेलमै परे । उचाइमा हुँदा त बेवास्ता गरियो अहिले त झन् कसलाई मतलब छ र रीतुको गुनासो छ ।
महिला क्रिकेट सुरु भएको करिब डेढ दशक बितिसक्दा पनि नेपालले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने आँट गरेन । आगामी सागको आयोजक नेपाल रहेको र क्रिकेट समावेश गरिएकाले महिला खेलाडीले आफ्नो मैदानमा खेल्ने अवसर पाएका हुन् । आफन्त र घरेलु समर्थकका अगाडि खेल्न पाउँछौं भन्ने उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास कहिल्यै लागेन । विश्वास दिलाउने काम पनि कतैबाट भएन । नेपाली महिला क्रिकेटमा लगानीका बारेमा यसैले छर्लङ्ग पार्छ । क्रिकेट नै नबुझ्नेले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् ।
महिला क्रिकेटको सुरुआत गर्ने नेपालगन्ज नै अहिले संकटमा पर्न थालेको छ । ममता र नेरीसहित २००७ को पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालगन्जबाट सात खेलाडी राष्ट्रिय टिममा थिए । त्यस बेला नेरी र महिला क्रिकेटको क्रेज छुट्टै किसिमको थियो । धेरै युवती नेरीजस्तै बन्ने सपना बोकेर समाजका बाधा तोड्दै ब्याट र बल बोकेर घरबाट निस्किन्थे । त्यही पुस्ताले अहिलेसम्म महिला क्रिकेट धानेको छ । ‘अहिले त नेपालगन्जमै पनि एक दुई महिना खेल्छन् रहर पुग्छ अनि हराउँछन्,’ ममता र नेरी मलिनो स्वरमा सुनाउँछन् ।
महिला क्रिकेटमा नयाँ खेलाडीलाई आकर्षित गर्ने सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन । मान्छेहरूले बिस्तारै ममता, सीता, नेरीलाई बिर्सन थालेका छन् । ममता भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीं सञ्चारमाध्यममा नाम आउँदा दिदी तपाईंहरू त क्रिकेट खेल्नुहुन्थ्यो रे नि भन्ने सुन्दा मन चसक्क हुन्छ । हामी ‘रे’ मा पुगिसक्यौं तर खेलप्रतिको माया र लगाव किन कम हुँदैन ?’ अगाडिको बाटो अन्योल देख्दा पनि राष्ट्रिय टिमको जर्सीको किन यति धेरै मोह ? उनीहरू आफैंलाई प्रश्न गर्छन् ।
पुरुष राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान एलबी क्षत्री नेपालमा महिला क्रिकेटको सुरुआत गर्नेमध्येका एक हुन् । २००४ मा नेपालगन्जमा पहिलोपटक महिला क्रिकेटको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । यही प्रतियोगिताको आधारमा नेपालले राष्ट्रिय टिम तयार गरेर २००७ मा मलेसिया खेल्न पठाएको थियो । क्षत्रीलाई नेपालले पहिलो सहभागितामा प्राप्त गरेको सफलता अहिले पनि अविश्वसनीय लाग्छ । क्षत्री भन्छन्, ‘त्यही बेला महिला क्रिकेटलाई क्यानले छुट्टै समिति बनाएर काम गर्नुपर्थ्यो । समकालीन देशहरूको तुलनामा हामी धेरै राम्रो थियौं । सबै राम्रो भइदिएको भए म दाबीका साथ भन्छु— पुरुषभन्दा महिला क्रिकेटले पहिले विश्वकप खेल्ने थियो ।’
२०१० देखि नेपालमा महिला क्रिकेट आरालो लागेको क्षत्रीको बुझाइ छ । ‘लक्ष्य किटान भएन, दीर्घकालीन योजना कहिल्यै बनेन,’ उनी भन्छन् । स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा महिला क्रिकेट यो अवस्थामा आइपुगेको उनको विश्लेषण छ ।
जुनसुकै देशले पनि सम्भावना भएको खेलमाथि लगानी गर्छ । थाइल्यान्डले त्यही गर्‍यो । पुरुषभन्दा महिला क्रिकेटले छिटो सफलता हात पार्ने देखेपछि उसले प्रभावकारी योजनाहरू कार्यन्वयन गर्‍यो । चीनले त्यसै गरिरहेको छ । क्षत्री भन्छन्, ‘अब एक दिन चीनले पनि हामीलाई माथ खुवाउँछ । त्यसमा केही अचम्म मान्नुपर्दैन ।’ उनलाई चिन्ता छ कुनै बेला नेरी थापा, रुविना क्षत्री, सरिता मगरजस्ता खेलाडी थिए र नेपालमा महिला क्रिकेट खेलिन्थ्यो भन्ने दिन नआओस् ! भिजनबिनाको नेतृत्व भनेको के हो भनेर कसैले बुझ्न चाहे नेपाली महिला क्रिकेटलाई हेरे पुग्ने क्षत्रीको विश्लेषण छ ।
हाल बन्द प्रशिक्षणमा रहेका ३५ जना खेलाडीमध्ये कसैलाई पनि अबको दुई वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने यकिन छैन । जुनियर खेलाडीले सोध्छन्, ‘हामी घरबाट सहयोग मागेर कहिलेसम्म खेल्ने ?’ सिनियर खेलाडीसँग यसको जवाफ छैन । उनीहरू आफैंले यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म पाएका छैनन् । यो बीचमा धेरै खेलाडी पलायन भइसकेका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) तीन वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको असर सबैभन्दा धेरै महिला खेलाडी नै छ ।
१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने भनाइ छ । महिला क्रिकेटरले पनि आफ्नो भूमिमा खेल्न १२ वर्ष नै कुर्नुपर्‍यो । सागमा खेल्ने सबै खेलाडीको लक्ष्य स्वर्ण पदक हो । महिला क्रिकेटरको लक्ष्य पदकसँगै अस्तत्विको लडाइँ पनि हो । उनीहरू देखाउन चाहन्छन् देशमा महिला क्रिकेट छ र यो टिम विश्वकप खेल्न सक्षम छ । हामीमाथि लगानी गर्ने हो भने खेर जाँदैन भन्न चाहन्छन् उनीहरू ।
महिला टिमकी कप्तान रुविना श्रत्रीले साग प्रशिक्षणकै क्रममा भनेकी थिइन्, ‘महिला क्रिकेट खेलाडीलाई पनि ब्रान्ड एम्बास्डर बनाउँदा हुन्छ, तपाईंको व्यवसाय घाटामा जाँदैन ।’ तापनि उनीहरूले कहिल्यै पुरुष खेलाडीसँग आफूहरूको तुलना गरेनन् । पुरुष टिम पनि धेरै संघर्ष गर्दै आजको स्थानसम्म आइपुगेको छ । यो टिमका आफ्नै समस्या छन् । पुरुष क्रिकेटलाई जति हेरचाह गरिन्छ अलिकति महिला क्रिकेटलाई पनि गरिदिए खेल्ने प्रेरणा मिल्ने थियो ।